“Islaamka waa in la mamnuucaa oo Muslimiinta waa in cunsuriyeeyaa” | Somaliska
“Islaamka waa in la mamnuucaa oo Muslimiinta waa in cunsuriyeeyaa”
Mid ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) ayaa cadeeyay in uu doonayo in la mamnuuco diinta Islaamka isla markaana la cunsuriyeeyo dadka Muslimiinta. Isagoo ka hadlaya Muslimiinta ayuu yiri.
“Waa in aan qirtaa. Waxaan doonayaa in aan cunsuriyeeyo Muslimiinta oo aan mamnuuco Islaamka. anigoo u danaynaya bani’aadamka. Dadka oo dhan isku mid ma ahan, dadka aaminsan Quraanka ee beenta u sheegaya Kiristaanka iyo wadamada dimoqraadiga. kuwaas dadka lama mid ahan. “ ayuu yiri ninka lagu magacaabo Robert Quiding.
Ninkaan ayaa sidoo kale ah garsoore isagoo mar la waydiiyay in uu si cadaalad ah ugu garsoori lahaa Muslimiinta, sheegay in taasi laga yaabo in aysan dhicin.
Hadalka ninkaan ayaa ah mid aan la yaab lahayn iyadoo horay ay dhowr jeer hadalkaa mid la mid ah ka dhawaajiyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbigaan. Laakiin hadalka cunsuriyiinta ayaa ah mid walwal leh maadaama ay si cad u muujinayaan naceybka ay u qabaan Muslimiinta.
Shaqaale ka tirsan Laanta Socdaalka oo lagu hayo dambi baaris
La yaab malahan ayagana uguma horeyn kuwa cunsuriyeeya naca islaamka lakin ayagaa xabsi aduun iyo aaqiro ku jira waayo qof walba oo muslim ah si xor ah ayuu aduunyada inteeda badi ku marayaa lakin kuwaan iyo kuwa la midka ah ayagoo waxba la yeeleyn ayey hadana baqayaan oo awooda iyo raxmada diinta islaamka ayaaba wax walba ugu filan, magaca argagixiso ayaga keenay ayagaana ku hoogay oo cabsi ayey ku hurdaan kuna soo kacaan waayo ayaga ayaa argagixiso ah. Laa’ilaaha Illaa anta subxaanaka inii kuntu minaddaalimiin Allahu Akbar.
Nin ka tirsan xisbiga SD in uu cunsuri yahay miyuu awal ka taagnaa su’aal. Ninkaan wuxurabo ha dhaho dadka muslimiinta iyo diin Islaamka ah wax uu u geysan karo ma jirto.
Asc walalaha ku xeran webkaan, waxaa idin wedinayaa, maxaa aqbaar ah dadkii 2 sano wax soo siyaaday ma jiraan baryahaan.
Ninkaan cunsurigaha ah wax oo KA qaadi karo malaha umuda muslimska ee wadankooda magangalyo usoo raasanay ilaah AA KA magangalnay sharta kufaarta
July 24, 2014 at 02:06
Innaa llaah yacdii manyashaa. Ninka sidaas u hadlay illaahay subxaanahu watacaallaana ku been abuurtay waa hanuunin karaa. Wxaanse illaahay ka baryayaa in haduusan hanuun laheyn illaahay calaamad uu la dhinto ku rido si degdeg ah walow daaimka alle iska dhaafo haduu qabtase ma daayo. Cunsurinimo iyo diin faqooq wadankaan waa ka gudbay. Qofkastaana ha ogaado in uu dintiisa xor u yahay dadka kale ee aan Islaamka aheyne tusa wanaagsan iyo syaasad soo dhaeyn ku dhsan diintana ugu yeera noqdana inaad yeelataan dabeecad wanaagsan iyo dhaqan lagu deydo midaas ayaana nalaka waayey,e gaaladu mar horey islaami laaaheeyen.
aw kaleeye says:
waxaa layaab leh dadkan pagekii walba aad furto su’aalahan noocan 2 sano kugu wareerinayo.
war wax isku fala oo gaadhiga dhagax u dhiga su’aal walba meeshedey leedahay
Aqii Aw Kaleeye waa sax su´aal walbo meel ayay ledahay, lakin hanala yaabin dhib ay ledahay hada ogaan laheyn kala maqnasha reerka saan uma hadashaan, teeka kale haddi aan dad wax su´aasho oo jawaabin fiican hesho soo ma ficnaan laheyn inaan iskala aamusnaan lahaa Aqii dhib ha´ii arkin waxaa ka hadlay fikirkeega adigana kaaga waa kuu banaan yahay wcs
A-qaii sxb su’aashada ma xumo meesha aad rabtidne xaq ayaad u leedahay inaad dadka ku weydiiso. Asxaabta kale qofkii jawaab haayo hala qeysado sxbkeen qofkii kalena wanaag ha isaga amuso. Aniga shaqsiyan wax aqbaar ah maka haayo laakin laga yabee dad iga fara dhuudhan iney halkaan joogo oo wax noo faa’ideyn karo.
Har inte läst artikeln men tänkte säga att hemsidan var fin! Synd att man inte klarar språket så bra 😉
July 25, 2014 at 01:07
xiisbiga cunsuriga swden waxa kaxuun xunsuriyiinta degan xamar oo maliin walba dhiibka kawada casiimadi umada somaliyeed kuwa adeer wax ka qoor horta , waxan ahay islaam inaga muslinimo isku nabad galiin waynay horta teena an kadoodno isla fahano ahmed diriiye iyo xaad iyo xasan culusow siidi laga yeli laha iyo shabeelada hoose
Ninkaan cunsuriga ah wuxuu ka shaqeeyaa Maxkamada Göteborg wuxuuna ka mid yahay odayaasha magaalada Göteborg. Laakiin hada baaritaan ayaa ku socda oo shaqada maxkamada waa laga joojiyey ilaa go,aan dambe. Ka fiirsada websidka aan kor ku soo xusay.